Wzọ 5 Nsogbu Dị Iche Iche Dị Nso Ga-emetụta Conszụ Azụ Ahịa | Martech Zone
Teknụzụ iBeacon bụ azụmaahịa ọhụụ na ahịa na azụmaahịa a na-ahụ anya. Teknụzụ na-ejikọ azụmahịa na ndị ahịa dị nso site na ndị na-ebugharị Bluetooth dị ala (mgbama), na-ezipụ Kupọns, nkwupụta ngwaahịa, nkwalite, vidiyo ma ọ bụ ozi ozugbo na ngwaọrụ mkpanaka ha.
iBeacon bụ teknụzụ kachasị ọhụrụ sitere na Apple, na afọ a na kwa afọ Nzukọ zuru ụwa ọnụ nke Onye Mmepụta, Teknụzụ iBeacon bụ isi okwu nke mkparịta ụka.
Na Apple na-ezi ọtụtụ puku ndị mmepe ihe banyere teknụzụ, yana ụlọ ọrụ dịka Mgbama Ọgba na-enye ngwa maka azụmaahịa iji teknụzụ na ikike iji tinye ya na ngwa ndị dị ugbu a, anyị nwere ike ịtụ anya ịhụ iBeacon ka ọ na-eto n'ike n'ike na ihe okike.
Maka ndị ahịa, iBeacons na idi nso di ire na ere ahia na-enye ụzọ ọhụrụ na ụzọ kwụ ọtọ iji jikọọ ndị ahịa, mụbaa mmata ngwa ahịa na mmetụta ịzụ ahịa ndị ahịa.
Na-anya ndị mmadụ ka ihe zụọ ozugbo. Gara aga ụbọchị nke ozi mail na QR Koodu. Teknụzụ iBeacon na-enye azụmaahịa ụzọ iji jikọọ na ndị ahịa nwere ike ịbịaru mgbe ha nwere ike ịzụta zụrụ – mgbe ha dị nso ma ọ bụ na ụlọ ahịa. Ulo oru di iche iche nwere ike izipu onyinye iji rata iji zuta ihe ma obu igba ume iji zuta ihe site na ozi na kupọns.
Na-enye ụlọ ọrụ a Direct akara ahịa. N'adịghị ka ụdị ahịa ndị ọzọ, ịbịaru nso a na-enye aka na-enye ụdị akara enyi iji nweta ozi ha n'aka ndị ahịa ha, n'ụzọ nkịtị. Ọ bụ ezie na enwere ike ịgafe ma lebanye akara ngosi ụlọ ahịa na-eleghara anya, izipu ozi na ekwentị onye ahịa na -emepụta njikọ aka ka mma. Ọ bụkwa ụzọ pụrụ iche iji gosipụta ụdị agwa ma wulite mmekọrịta siri ike na ndị ahịa.
Otutu aka ya na onye ahia gi. Otu ebe nwere ike inwe mgbama dị iche iche, nke ọ bụla na-enye ozi dị iche. Nke a na-enye ọtụtụ ohere ijikọ na onye ahịa ma chụpụ ha ime ihe. Ọ bụ ezie na nkwalite a na-ezigara ụlọ ndị ahịa ozugbo nwere ike ọ gaghị eji ya ma ọ bụ na-amanye ha ịzụta otu ihe, mgbama na-enye ndị ahịa ohere iziga ndị ahịa ọtụtụ onyinye dị mkpa na-adọrọ adọrọ ịzụta. Mgbama na ahịa ahịa na ebe onye ahịa, na-eziga ọtụtụ nkwalite na ihe ndị dị mkpa maka mkpa ha niile n'oge niile.
Mgbama na-enye azụmahịa nchịkọta ndị ahịa pụrụ iche. Mgbe ị na-eji teknụzụ eme ihe site na ngwa dịka BeaconStream, azụmaahịa nwere ohere ịdị ndụ nchịkọta na nghọta na agwa ndị ahịa, ịzụ ụkwụ, ọnọdụ na omume ịzụ ahịa nke nwere ike inyere ha aka ịme ka atụmatụ ahịa na ahịa ha ka mma. Na nchịkọta nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịchọpụta nke nkwalite na mkpọsa rụrụ ọrụ ma nye ha ohere ịgbanwe ozugbo na nghọta ndị a.
iBeacon na ahia di nso na ahia abughi ihe efu. Ndị na-ere ahịa amaraworị ike nke azụmaahịa ekwentị, yana teknụzụ iBeacon bụ nnabata nnabata na usoro ahịa zuru oke. Brandsdị ndị kachasị dị ka Macys, Starbucks na American ụgbọ elu etinyeworị nnukwu ego na ya, ma na-ahụ ike na uru nke ahịa dị nso. Site na ndị isi egwuregwu na-agbanye teknụzụ, n'oge na-adịghị anya anyị nwere ike ịtụ anya ịhụ atụmatụ ndị agbakwunyere, dị ka ịkwụ ụgwọ mkpanaka na ntanetị, na-eme ka ịzụta dị mfe karị maka ndị ahịa na ịchụpụkwu ahịa maka azụmaahịa.
Nke a bụ otu BeaconStream si arụ ọrụ
Tags: apụl ibeaconosisimgbama mmiriahia ahia bluetoothibeakonidi nso di ire na ere ahia
Chris bụ Chief Innovation Officer nke Mgbama Ọgba, a mbọhọ dabeere mobile ahịa ngwa. BeaconStream na-enye azụmaahịa ụdị na nha niile ụzọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji jikọọ ndị ahịa nọ nso, na-ezitere ha Kupọns, nkwupụta ngwaahịa, nkwalite, vidiyo ma ọ bụ ozi, ozugbo na ngwaọrụ mkpanaka ha.
Jul 14, 2014 na 11: 17 AM
Akwa post Chris !! Ezigbo ozi bara uru .. Daalụ maka ịkekọrịta! ..
Jul 16, 2014 na 5: 10 AM
Obi dị m ụtọ na ị tụrụ aka na nke a! Ọ dịghị onye na-ekwu maka nke a. Echeghị m na ọ dị onye gụrụ ntuziaka ọhụrụ ahụ. N'echiche m, ị tụlere ọmarịcha isi gbasara ahịa dị nso nke dị ịtụnanya maka ndị na-ere ịntanetị. Daalụ maka nnukwu post a.
Jenụwarị 15, 2015 na 9:49 PM
Daalụ maka nnukwu post Chris. N'oge na-adịbeghị anya, e nweela mkpọtụ banyere etu ịbịaru nso nwere ike ịbụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị dị irè nke nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka iwepụta ROI dị elu karịa mfe. N'ezie, ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ nwere echiche na ịga n'ihu ọ kachasị mma maka azụmaahịa iji kwekọọ atụmatụ atụmatụ ahịa ha na mkpa na mmasị nke ndị na-azụ ha. Agbanyeghị, ebe ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-amaghị maka etu esi ejikọ mgbama na usoro mkpanaka ha, ụfọdụ n'ime ọnwụnwa ndị a bụ ihe mmechuihu. Anyị atụlela ihe nzuzo nzuzo na-aga nke ọma na-aga n'ihu na-aga nke ọma nke ga-enyere ndị na-ere ahịa aka ịme mkpọsa ha ọzọ ebe a: http://blog.mobstac.com/2015/01/4-tips-to-kickstart-your-proximity-marketing-campaign/